FSND Saab 340 FSX - Freeware
100% mifanaraka amin'ny FSX SP2. Famolavolana tetikady lehibe, VC tsy misy fepetra, fiovan'ny rivodoza sy ny asa fitaka. Ny tranonkala iray manontolo dia najoro tanteraka, izay ahafahana mivezivezy any amin'ny trano fatoriana raha misy mpandeha handao ny sezany. Fihetseham-po feno amin'ny faritra azo alaina tahaka ny tohatra fiakarana.
Vakio amim-pitandremana tahirin-kevitra rehetra tafiditra ao amin'io fonosana.
Saab 340 dia fiaramanidina kely nalaza tamin'ny roa turboprops ary natao ho an'ny sidina kely lavitra. Nisy novokarin'ny ny mpiara miasa eo Saab sy Fairchild Aircraft. Rehefa nitsahatra ny farany asa rehetra, fanorenana rehetra dia niasa tao amin'ny orinasa Saab Linköping any Soeda. Taorian'ny sidina voalohany sy ny ara-barotra fandefasana any 1983, tsara kokoa fampisehoana dikan-hendry dia mandroso ka nataony ho amin'ny fanompoana ao amin'ny 1989, eo ambanin'ny ny anaran'i 340 B. ity dikan faharoa soa indrindra indrindra ny iray matanjaka kokoa sy lehibe kokoa motorisation fizakantena. Rehefa namoaka 430 vondrona ireo, ny orinasa famokarana rehetra nijanona tao 1998, fa ny fiaramanidina no mbola ampiasain'ny orinasa an'habakabaka maro manerana izao tontolo izao. (Source Wikipedia)
Downloads 26 378